FJKM-QUEBEC, auteur sur FJKM Québec - Canada
Posts by FJKM-QUEBEC
1 – 10 of 531 items
4 jours ago by FJKM-QUEBEC
Hits: 10 Mofonaina Ny olona miandry ny fanjakan’Andriamanitra MARKA 15 : 42-4715:42 Ary nony hariva (satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan’ny Sabata), 15:43 dia avy i Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja, izay isan’ny Synedriona sady niandry ny fanjakan’Andriamanitra koa; ary sahy niditra tao amin’i Pilato izy ka nangataka ny fatin’i Jesosy. […]
11 octobre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 6 Mofonaina Ny olona feno ny Fanahy Masina ASAN’NY APOSTOLY 13 : 6-1213:6 Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tany Pafo izy, dia nahita Jiosy anankiray atao hoe Barjesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka, 13:7 izay nitoetra tao amin’i Sergio Paolo, governoran’ny tany sady lehilahy hendry; ary izy nampaka an’i Barnabasy sy i […]
9 octobre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 12 Mofonaina Ny mpino miatrika ady TANTARA VOALOHANY 14 : 8-1714:8 Koa nony ren’ny Filistina fa efa nohosorana ho mpanjakan’ny Israely rehetra Davida, dia niakatra hitady azy ny Filistina rehetra. Koa raha ren’i Davida izany, dia nivoaka hiady taminy izy. 14:9 Ary dia tonga ny Filistina ka nihahakahaka teny amin’ny Lohasahan’ny Refaita. 14:10 Ary […]
07 Oktobra 2020
6 octobre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 8 Mofonaina Ny olona mahiratra JAONA 9 : 35-419:35 Jesosy nandre fa efa noroahiny ralehilahy; ary rehefa nahita azy Izy, dia nanao hoe: Mino ny Zanak’Andriamanitra va ianao? 9:36 Ralehilahy namaly ka nanao hoe: Iza moa no Izy, Tompoko, mba hinoako Azy? 9:37 Hoy Jesosy taminy: Efa nahita Azy ianao, sady Izay miresaka aminao […]
29 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 11 Mofonaina Ny fahatahorana an’ i Jehovah OHABOLANA 9 : 7-129:7 Izay mananatra ny mpaniratsira dia afa-baraka; ary izay mananatra ny ratsy fanahy dia hahazo tsiny. 9:8 Aza mananatra ny mpaniratsira ianao, fandrao halany; ny hendry no anaro, dia ho tiany ianao. 9:9 Toroy ny hendry, dia hihahendry izy; ampianaro ny marina, dia hitombo […]
27 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 12 Mofonaina Miasà amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra EFESIANA 5 : 8-125:8 Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava ( 5:9 fa ny vokatry ny mazava dia ao amin’ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana), 5:10 mamantatra izay ankasitrahan’ny Tompo. 5:11 Ary aza […]
23 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 10 Mofonaina Ireo toetra takiana amin’ny mpiandraikitra tsirairay avy eo anivon’ny Fiangonana MALAKIA 2 : 1-92:1 Ary ankehitriny, ry mpisorona, dia ho aminareo izao didy izao: 2:2 Raha tsy hihaino na handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, dia halefako hamely anareo ny ozona, ka hozoniko ny tso-drano ataonareo; […]
22 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 9 Mofonaina « Fantaro kosa fa hisy soa ho an’izay matahotra an’Andriamanitra eo anatrehany » (and 12 MPITORITENY 8 : 9-138:9 Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin’ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambanin’ny masoandro. Misy andro anapahan’ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. 8:10 Ary tamin’izany dia […]
21 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 12 Mofonaina Ny fahatahorana an’i Jehovah OHABOLANA 15 : 29-3315:29 Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy; fa ny fivavaky ny marina no henoiny. 15:30 Ny tarehy miramirana mahafaly ny fo; ary ny filazan-tsoa mamelombelona ny taolana. 15:31 Ny sofina izay mihaino anatra mahavelona dia miara-mitoetra amin’ny hendry. 15:32 Izay manda anatra dia manary tena; […]
20 septembre 2020 by FJKM-QUEBEC
Hits: 12 Mofonaina Matahora an’Andriamanitra DEOTERONOMIA 10 : 12-2210:12 Ary ankehitriny, ry Israely o, inona moa no ilain’i Jehovah Andriamanitrao aminao, afa-tsy ny hatahotra an’i Jehovah Andriamanitrao sy ny handeha amin’ny lalany rehetra ary ny ho tia Azy sy hanompo an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, 10:13 hitandrina ny didin’i Jehovah […]